Hospitallọ Ọgwụ Southern - Shenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
Hospitallọ Ọgwụ Southern
Ntọala na 1941, Hospitallọ Ọgwụ Southern bụ ụlọ ọgwụ ejikọtara na mbụ na kọleji ahụike ahụike nke Mahadum Medical Medical nke mbụ (nke bụbu Mahadum Medical Medical mbụ). Ọ bụ nnukwu ọkwa zuru oke nke ụlọ ọgwụ 3A na-etinye ọgwụgwọ, nkuzi, nyocha sayensị na mgbochi na nlekọta ahụike. mbụ ogbe nke ParknShop n'ụlọ ọgwụ na mba ahụ.
Enwere akwa 2225 n'ụlọ ọgwụ, na 52 ọkachamara ọzụzụ na-edozi n'ụlọ ọgwụ. Disciplinedọ aka ná ntị mbụ nke usoro ọgwụgwọ bụ akara ikike nke ogo mmụta doctorate na ọdụ ụgbọ mmiri nke nyocha postdoctoral. Esịtidem ọgwụ (digestive usoro ọrịa) bụ mba isi ịdọ aka ná ntị, na ịwa ahụ (orthopedic) bụ mba isi ịdọ aka ná ntị. Ngalaba Gastroenterology, Gynecology, Obstetrics, Orthopedics, Laboratory Medicine, Pathology, Hematology, Neurosurgery, Stomatology, Nephrology, General ịwa ahụ, Oncology, ọrịa Medicine, plastic ịwa ahụ bụ ndị na-agwọ ọrịa key obodo, na 31 adakarị key specialties na Guangdong Province. O nwere Laboratory isi obodo maka Mgbochi na ọgwụgwọ ọdịda Organ na National Clinical Medical Research Center maka ọrịa akụrụ na-adịghị ala ala. Thelọ ọgwụ ahụ ebutela ụzọ na ịtọlite ​​"Ngosipụta Ngosiputa Ahụike Ahụike", "Li Kezhong Medicine agụmakwụkwọ School Base" na "treatmentlọ Ọrụ ọgwụgwọ maka Ọrịa siri ike na nke mgbagwoju anya nke Ọgwụ China Oge Ochie" na mba ahụ dum. E guzobere Guangdong Institute of Nephrology na Southern Institute of Disees Diges.
Thelọ ọgwụ ahụ amalitela uru asatọ nke nyocha na ọgwụgwọ nke ọrịa na-agbari nri, ọrịa akụrụ, ịba ọcha n'anya, ọgwụ perinatal, nchoputa zuru oke na ọgwụgwọ etuto ahụ, ọgwụgwọ trauma, microneurosurgery na anụ ahụ na ịkpụgharị akụkụ ahụ, yana usoro nyocha anọ nke teknụzụ ahụike. na-agwọ ọrịa mkpụrụ ndụ, nyocha na ọgwụgwọ endoscopic pere mpe na-emerụ ahụ, nyocha nyocha na ọgwụgwọ na ọgwụgwọ nnukwu ọrịa dị egwu.